PressReader - Ilanga: 2018-07-05 - OSAZIWAYO ABAQAVILE EMICIMBINI YE-VDJ
OSAZIWAYO ABAQAVILE EMICIMBINI YE-VDJ
Izivakashi zizobhema zikholwe
Ilanga - 2018-07-05 - Front Page - LUCKY CAIN
BANXUSWA ukuba bangazincishi ithuba lokubona izindawo zokuvakasha ezikhona eThekwini namaphethelo, abantu abazotheleka kuleli dolobha beya kwiVodacom Durban July (VDJ).
UMnu Sbusiso Zondi oyisikhulu esiphezulu sakwaDurban Tourism, unxusa izihambeli ukuba zisheshe zitheleke ukuze zikwazi ukuthola kabanzi ngaleli dolobha nangezindawo eligabe ngazo kwezokuvakasha.
“Siyazi ukuthi abantu abaningi uma becabanga iTheku, bacabanga ulwandle kanti ngaphandle kwalo sinothile ngezokuvakasha.
“Sineziqiwi nezintaba kanti kasikho kude nezindawo ezifana noMandela Capture Site nakuba ingekho ngaphansi kweTheku kodwa abantu uma beze eThekwini ngeke kubathathe isikhathi esiningi ukuya khona,” kusho uMnu Zondi.
Uthi iTheku selikulungele ukwamukela izinkumbi zabantu ezizobe ziye kulo mcimbi othathwa njengomkhulu e-Afrika, ohlanganisa amahhashi nemfashini.
Utshele ILANGA ukuthi beyiTheku baqale emasontweni ama- bili adlule ukulungiselela iVDJ kanti ngokwesimo somnotho, balindele ukuhlomula ngo-R120 000 000.
“Lapha sikhuluma ngamathuba emisebenzi azokwakheka, wukugcwala kwamahhotela, yizindawo zobumnandi esinazo ezahlukene abantu abazozihambela nokunye okuzobe kuthinta ezokuvakasha,” kusho yena.
“Uthi kakukhona ukuthi kuyazintelelwa nje uma iTheku liteketiswa ngokuthi liyinkundla yokudlala yase-Afrika.
“SiyiTheku siyaziwa ngokusingatha ngempumelelo imicimbi emikhulu,” kusho uMnu Zondi.
Kulo mcimbi kulindeleke osaziwayo, osopolitiki, osomabhizinisi, amaphanta nabathandi bemfashini nobumnandi.
Kulindeleke ukuba imicimbi eyandulela iVDJ isaphake njengoba ngoLwesihlanu, kukhona ozoba seGagasini, eThekwini, obizwa ngeLadies Night lapho kuzobe kunandisa abaculi noDJ besifazane, kube ngowaseYadini Lounge, eMlazi lapho kuzobe kusakaza bukhona iMetro FM, kube noweKasi July Mayhem ozoba se-Artizen, KwaMashu.
NangoMgqibelo amatende azobe ehlomile ngokwamukela izicukuthwane njengoba kuneleGagasi FM, ele-Afrotainment, elaseYadini namanye.
Umcimbi wedumela weFact Durban Rocks nawo uzobe ubophele inqwaba yabaculi nosaziwayo eMoses Mabhida ngawo uMgqibelo. Imicimbi ehambisana neVDJ izophothulwa ngeSonto kwezinye izindawo kanti kwezinye koze kube wuMsombuluko - obizwa ngeMonday
SiyiTheku siyaziwa ngokusingatha ngempumelelo imicimbi emikhulu.
UZOBA matasa kule mpelasonto uDJ Zinhle njengoba ezobe enandisa emicimbini eminingi ehambisana nezinhlelo zeVodacom July. UDJ Kotin uzobadida ngengoma kwiKasi July Mayhem kule mpelasonto.
UMNU Sbusiso Zondi oyisikhulu esiphezulu sakwaDurban Tourism, unxusa izihambeli ukuba zisheshe zitheleke ukuze zikwazi ukuthola kabanzi ngaleli dolobha.